<º Ciyaaraha: Dabin Verminian | Laga soo bilaabo Linux
Waxay yihiin Link | | Ciyaaraha, Noticias, Lagu taliyay
Maanta waxaan kuu keenayaa ciyaartii ugu dambeysay ee kuwa waa weyn Locomalito: Dabinka Verminian.
Ciyaartaan qaybtaada boos waxaa lagu qasbay inay deg deg deg ah ugu soo degto meeraha Verminiyaan, oo ay ku nool yihiin cayayaanka waaweyn. Hadafkeenu waa inaan soo afjaro dadka badan ee la socda asxaabteena iyadoo rajada laga qabo in markab badbaadin uu yimaado.
Ciyaartan waxaa ciyaari kara ilaa 4 qof (2 oo leh kumbuyuutarka iyo 2 oo leh kantaroolayaasha) waana mid xusuusinaya ciyaaro sida Magaalada dagaalka (NES / Famicom) ama filimka Troopers Starship.
Waxaa loo heli karaa Windows, GNU / Linux, OS X iyo Ouya oo soo degsashadeeda, sida caadiga ah shaqooyinkeeda, waa bilaash.
Shaki la'aan waxaan wajaheynaa ciyaar kale oo weyn oo Locomalito ah.
Waxaan kaaga tagayaa marka xiga a gameplay aniga ayaa sameeyay (Waan ka xumahay tayada fiidiyowga, xallinta ciyaarta ayaa hooseysa.):
Bogga ciyaarta iyo soo degsashada
Haddii aad isticmaasho Archlinux ama Manjaro waad ka rakibi kartaa AUR adoo isticmaalaya xirmada xayawaan-dabin
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Ciyaaraha » <º Ciyaaraha: Dabin Verminian ah
Hagaag ciyaarta waxay umuuqataa mid balwad leh. Hadaan qadka kujiro waxay noqon laheyd caano.
Kulankaan waa mid cajiib ah. Aan aragno haddii aan baabi’in karo belaayadaas.
Waxa ugu horeeya ee kugu hambalyeeyo shaqadan weyn. Cayaartu waa BILAASH! Waxay i xasuusisaa wax badan oo ka mid ah Amstrad CPC 128 kb, waxay leedahay ciyaar aad u wanaagsan oo aad u balwad badan !!! Dhawaaqyadu sidoo kale way qaboobaan. RUNTA SHAQO WEYN!
Waxa keli ah ee aniga oo kale ah sidaan oo kale ugama adka wax xoogaa gacmo duubnaada kumbuyuutarka hahaha… hello weyn!
Anigu waxaan ahay bidix wax dhibaato ahna kuma qabo kumbuyuutarka ama kontaroolada.
Ciyaar wanagsan aniga ahaan heesaha, waad ku mahadsantahay inaad la wadaagto qof walba.
Mahadsanid! Waxay umuuqataa mid fiican. Runtii waxay umuuqataa mid balwad leh waxayna ixasuusineysaa Dagaalkii Magaalada sidoo kale.
Tani waa waxa ii muuqda markaan isku dayo inaan maamulo: S
Berri si ka sii deggan ayaan isugu dayaa. Waqtigaan la joogo, waxaan dhammeystirayaa cusbooneysiinta Windows Vista (maanta waa ducadii barakaysnayd).
Waa maxay nooca loo yaqaan 'distro' iyo nooca furan ee aad rakibtay?
Waxaan haystaa 1.15.1
Locomalito wuxuu adeegsadaa istuudiyaha Gamemaker wuxuuna ubaahanyahay ugu yaraan Ubuntu 12.10, marka waxaad ubaahan doontaa inaad ugu yaraan Openal 1.14 rakibto
Waxaan kuu hayaa nooc la mid ah adiga, Ayaan ka soo rakibey.
La heli karo SolusOS 2 Alpha 9